> Resource > Mac > iMac Photo Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photo ka iMac
Sidee baan ku soo celin kartaa Photos tirtiray ka iMac
Waxaan tirtiray tirtirto qaar ka mid ah sawirada ka iMac si qalad ah maanta, oo waxaan ka shubeen qashinka iminka. Laakiin waxaan doonaya sawirada dib u Degdagi! Maxaa samayn karaa?
Tan iyo markii aad sidoo kale ka shubeen qashinka, xalka ugu wanaagsan uguna fudud inuu ka soo kabsado images tirtiray on iMac waa in la isticmaalo Time gurmad Machine. Laakiin haddii aadan haysan Time gurmad Machine, waxaad weli soo kaban karto sawiro tirtiray ka iMac inta aad qaado talaabo degdeg ah oo raac talaabooyinka midig. Mid ka mid ah dareen caadi ah oo ku saabsan sawirka khasaaray waa in ay noqdaan oo kaliya geli karin on your iMac ka hor xogta cusub iyaga overwrites. Sidaas, joojin adiga oo isticmaaleya isticmaale iMac iyo aad u hesho iMac codsiga soo kabashada sawir dhinac saddexaad ah la xaawilayo in aad sawiro tirtiray hadda.
Wondershare Data Recovery for Mac noqon kartaa doorashada ugu fiican ee aad u soo celin badiyay, tirtiray, formatted ama xitaa ku kharribeen sawirrada iMac, iyadoo aan loo eegayn sawirada waxaa laga badiyay ka iPhoto, qashinka iMac, ama aaladaha kaydinta kale sida camera digital, drive dibadda adag, kaadhka xusuusta, iwm Waxaad kartaa hoos ku soo bixi version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac ah. Version maxkamad Arintan waxay u sahlaysaa in aad baarista iMac iyo Xiisaha photos helay si aad u hubiso sida badan oo sawiro waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano ka dhigi kara.
3 Talaabada si loo farsameeyo iMac Photo Recovery
Tallaabada 1 Dooro "lumay Recovery File" Mode inay bilow Recovery
Ku rakib Wondershare Data Recovery for Mac aad iMac oo abuurtaan, aad arki doonaa a qaab bilowday suuqa kala socda fursadaha: "lumay Recovery File", "ceeriin Recovery", "Recovery Barzakh", "iPhone Recovery ka Lugood" iyo "furmaya Recovery". Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha faahfaahsan oo iyaga ka mid ah si ay u bartaan sida ay u shaqeeyaan.
Halkan, inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka iMac, waxaad isku dayi kartaa "lumay Recovery File" hore.
Tallaabada 2 Dooro Barzakh / Volume on Your iMac leeg u Khasaaray Photos
In talaabo fudud, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan Risaalo ka midigta ama mugga si ay u bilaabaan iskaanka for images laga badiyay. Dhammaan qoruhu iyo mugga si toos ah waxaa lagu ogaan doonaa oo ku qoran suuqa kala barnaamijka. On shardi u ah in sawiro aad lumeen sababtoo ah formatting, waxaad dooran kartaa "awood u qoto dheer scan" doorasho.
Fiiro gaar ah: Fadlan si fiican u xirmaan qalab lagu kaydiyo dibadda ah oo aad iMac haddii aad rabto in aad dib u soo ceshano sawiro ka.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo Soo Celinta Photos tirtiray ka iMac
Waxaas oo dhan images helo waa la tusay doonaa fayl ee bidix ee daaqadda. Waxaad iyaga ku eegaan karo in lagu hubiyo sida badan oo sawiro waxaad awoodi doontaa inaad dib u soo ceshano. Dooranaysaa Sawiradan aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" in la soo celiyo oo dib u badbaadin aad iMac.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwriting, fadlan dooro ah xijaab / mugga cusub in ay sii sanamyada soo kabsaday.